Tayeynta Adeegsiga Af Soomaaliga ee Warbaahinta
Hawlgal Wadajir ah
Xarunta Horumarinta Cilmi-baarista Puntland (PDRC)
Ururka Warbaahinta Puntland (MAP), iyo
Akademiye-goboleedka Afka Somaliga (AGA)
Xarunta Horumarinta Cilmibaarista Puntland (PDRC), Akademiya-goboleedka Afka Somaliga (AGA) iyo Ururka Warbaahinta Puntland (MAP) waxay si wadajir ah u qabanqaabiyeen Aqoon-is-weydaarsi hal maalin ah oo ujeeddadiisu ahayd in la tayayo adeegsiga Afka Somaliga ee warbaahinta. Aqoon-is-weydaarsigu wuxu si gaar ah u beegsaday hablaha weriyeyaasha ah oo ku bahabooey “Ururka Hablaha Weriyeyaasha ah” ee Nugaal, kuwaas oo ka hawlgala caasimadda dawladda Puntland. Ilaa iyo soddon (30) gabdhood oo ka hawlgala idaacadah, wargeysyada iyo TV-yada ay aka qaybgalay aqoonisweydaarsiga. Aqoon-is-weydaarsigu wuxu diiradda saaray mawduucyo ay ka mid yihiin: Muhimmadda Afka Somaligu u leeyahay warbaahinta, caqabadaha ka jira adeegsigiisa iyo talo-bixin ammuurahaas la xiriira.
Furitaankii aqoon-is-weydaarsiga ayaa waxa hadal ka soo jeediyey K/S Agaasimaha Xarunta PDRC, isaga oo guddomiyaha AGA, Mohamed Daahir Afrax, iyo Goddomiyaha MAP, Faysal Khaliif, uga mahadceliyey taageerada joogtada ah oo ay la garab taagan adeegsiga saxda ah iyo ilaalinta Afka Somaliaga looga hadlo Somalia, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Agaasimuhu wuxu ballanqaaday in PDRC ay sii wada doonto taageerada ay u fidiso guud ahaan bahda warbaahinta, gaar ahaanna hablaha dhallinta ee weriyeyaasha ah.
Wasiirka warfaafinta, dhaqanka iyo hiddaha, Md Cabdiwali Xirsi, ayaa si rasmi ah u furay aqoon-is-weydaarsiga. Wuxu carrabka ku adkeeyey in ay muhiim tahay in warbaahinta loo adeegsado dhawrista iyo habsami-u-adeesiga Af-Somaliga, si kor loogu qaado Hiddaha iyo Dhaqanka Somalia/Puntland.
Guddomiyaha MAP, Faysal Khaliif, Ayaa isana soo dhowayay ujeeddada aqoon-is-weydaarsiga oo ay hadaladiisa ka mid ahaayeen “…waa fursad qaalli ah oo bahda warbaahinta u soo hoyatey in aanu khaldaadkayaga, oo dhaawici kara jiritaanka Af-Somaliga, dib-u-eegis ku samayno oo aanu saxno.
Dr. Mohamed Dahir Afrax ayaa ka qayb-galayaasha u soo bandhigay casharro mawduuca ku saabsan, balse marka hore hablaha weriyeyaasha ah koox-hawleedyo u qaybiyey si ay u soo falanqayaan caqabadaha ka haysta adeegsiga Afka Somaliga iyo dhbaatooyinka ay kala kulmaan marka ay hawshooda ku gudajiraan. Intaas ka dib wuxu soo jeediyey afarta qaybood oo udu-dhexaadka u ah adeegsiga suuban ama saxda ah ee Af Somaliga, sida: Waxbarashada, Warbaahinta/warfaafinta, adeegga bulshada iyo suugaanta.
Waxa xusid mudan in hablaha aqoon-is-weydaarsiga ka soo qaybgalay ay ay garwaaqsadeen in ay si khaldan u adeegsadaan Af-Somaliga guud ahaan warbaahintu. Hablaha weriyeyaasha ahi waxay arrimahaas u aanaayeen dhawr sababood oo ay ka mid yihiin in aaney jirin qoraaallo haga, soo biirista ereyada qalaadnidaamka waxbarashada dalka oo liita iyo colaadaha dabo-dheeraaday.
Casharradu markii ay soo gabagaboobeen ayaa Dr, Afrax, k/s agaasimaha Cali Farax iyo Cabdi Farax Juxa (Wasiirkii hore ee waxbarasha)aya si wadajir ah ugu jawaabey su’aalo fara badan oo ay ka-qayb-galayaashu u soo jeediyeen. Isla markaasna waxa la soo jeedinayey talooyin ku saabsan sidii loo tayayn lahaa adeegsiga afka somaliga ee warbaahinta.
Akademiya Gobolledka Afka Somaliga waxa lagu daahfuray Djibouti, 26kii Juun 2013; iyada oo ujeeddada laga lahaana ay ahayd in lagu ilaaliso oo lagu horumariso Afka Somaliga. Xafladdaas Wasiirka warfaafinta Puntland ayaa ku dheeraaday xiriirka ka dhexeeya akademiyada iyo warbaahinta iyo sida ay dawladda Puntland ugu heelan tahay iska kaashiga ammurtaas.
Ururka Warbaahinta Puntland (MAP); oo ah hay’ad madaxbannaan oo ay ku bahoobeen ururada warbaahinta Puntland iyo Xarunta Horumarinta Cilmi-baarista Puntland (PDRC) iyo hay’adda ay bah-wadaagta yihiin ee Interpeace, waxay dhawr iyo tobankii sano oo la soo dhaafay iska kaashanayeen gacansiinta warbaahinta curdinta ah ee Puntland iyaga oo tababarro iyo taakulo kaleba had iyo jeer la garab taagnaa.
Faahfaahin Dheeraad ah kala Xiriir:
The Intergovernmental Academy of Somali Language (Technical Lead) – mdafrax@gmail.com The Media Association of Puntland (Coordinating Agency) – info@mediapuntland.com